आजको राशिफल : मङ्गलबार तपाईंको दिन कस्तो छ ? – Khabarhouse
आजको राशिफल : मङ्गलबार तपाईंको दिन कस्तो छ ?
Khabar house | २५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ०१:२६ | Comments
काठमाडौं : विसं २०७८ साल जेठ २५ गते मङ्गलबार । इस्वी सन् २०२१ जुन ०८ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । उत्तरायण । ग्रीष्म ऋतु । श्रीशाके १९४२ । जेठ कृष्णपक्ष । तिथि–त्रयोदशी, १६ घडी १७ पला, बिहान ११ बजेर ४० मिनेट उप्रान्त चतुर्दशी । नक्षत्र–भरुणी, ०३ घडी १७ पला, बिहान ०६ बजेर २८ मिनेट उप्रान्त रोहिणी । काठमाडौँमा सूर्याेदय बिहान ०५ बजेर ०९ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ५६ मिनेट । दिनमान ३३ घडी २८ पला ।
मेष राशि : बिहानको समय राम्रो रहेकाले दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने छ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा लगानी गरी राम्रै आम्दानी गर्न सकिनेछ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकाले नराम्रा तथा अ’प्रिय समाचारमा मन खि’न्न हुनेछ । वचन पूरा गर्न नसक्दा आफन्त तथा इष्टमित्रहरू तपाईंदेखि टाडिन सक्छन्, ध्यान दिनुहोला ।
बृष राशि : राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन रहनेछ । परिवार तथा आफन्तजन सँगसँगै रहेर दिन कटाउन पाउँदा मन प्रसन्न रहनेछ। आत्मविश्वासमा वृद्धि हुने हुनाले काम गर्न आँट आउनेछ । समयमा काम गर्न सकिने हुँदा मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा बढुवा हुनेछ । बिहानको समयमा खर्च बढ्ने योग रहेको छ ।
मिथुन राशि : अरूको काममा समय बित्ने तथा अरूको काम गर्न खोज्दा आफ्नो काम थाँती रहनेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त समय लगानी गर्दा पनि आम्दानी थोरै हुनेछ। यात्राको सम्भावना रहेको छ भने विदेशी संस्था तथा नियोगतिर काम पाउने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । सामान्य आँखा सम्बन्धी स’मस्याले सताउन सक्छ, ध्यान दिनुहोला ।
कर्कट राशि : माया प्रे’ममा थप प्रगाढता बढेर जानेछ भने दा’म्पत्य जीवन खुसी रहनेछ । पढाइलखाइमा तपाईंको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ भने प्रविधिको प्रयोग मार्फत अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्याव सायमा लगानी गरी राम्रै आम्दानी गर्न सकिनेछ । साँझपख बाहिरी वातावरण तथा मौसमको ख्याल गर्नुहोला, स्वास्थ्यमा स’मस्या आउन सक्छ ।
सिंह राशि : साङ्गीतिक माहोलमा दिन बित्ने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा गरिएको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुने छ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने छ । नीति निर्माण तहमा तपाईंको सहभागिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा लगानी गरी राम्रै आम्दानी गर्न सकिनेछ । बिहानको समयमा यात्रा गर्दा विशेष ध्यान दिनुहोला ।
कन्या राशि : व्यापार व्यावसायमा लगानी गर्न केही समय कुर्नु नै पर्नेछ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ, ख्याल गर्नुहोला । समयमा काम नसकिने हुँदा विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ, ध्यान दिनुहोला । आफन्त तथा नजिकका मानिसबाट कामका धो’का हुनेछ । सङ्गत गर्दा ध्यान दिनुहोला, गलत मानिसको फ’न्दामा परिन सक्छ । धा’र्मिक तथा शैक्षिक यात्रा गर्दा विचार गर्नुहोला, कष्टकर पनि हुन सक्छ ।
तुला राशि : बिहानको समय राम्रो रहेकोले दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । अध्ययनमा भनेजस्तो सफलता हात पार्न सकिनेछ भने खोज मूलक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकाले आर्थिक अवस्था कमजोर रहने हुनाले घर परिवारका आवश्यकताहरू पूरा गर्न गाह्रो पर्नेछ । भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला ।
बृश्चिक राशि : पढाइलेखाइमा अरूभन्दा अगाडि तपाईंको नाम आउँदा मन प्रसन्न रहनेछ भने प्रविधिको प्रयोगमार्फत अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । माया प्रेमको गाँठो मजबुत भएर जानेछ भने दाम्पत्य जीवनमा थप खुसीयाली छाउने छ । आफन्तका साथ मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । आम्दानी बढ्ने हुनाले विलासी जीवन यापन गर्न सकिनेछ ।
धनु राशि : बिहानको समय मध्यम रहेकाले सवारी साधन तथा अन्य वस्तुहरूको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला, नराम्रा घटना घट्न सक्छन् । प्रेममा एकअर्कालाई अविश्वास गर्दा मन मु’टाव बढ्नेछ। मध्यान्हबाट समय मध्यम रहेकाले राजनीति गर्नेहरूले सहकर्मीहरूलाई किनारा लगाउँदै पद प्रतिष्ठा पाउनेछन् । माया प्रे’ममा सा’मीप्यता बढेर जानेछ भने मामा तथा मावली पक्षबाट सहयोग तथा समर्थन पाइनेछ ।
मकर राशि : अध्ययनमा मन नजाने हुनाले अरूभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताउनेछ । आफन्त तथा घरपरिवारका सदस्यहरूको पनि सहयोग तथा समर्थन नहुँदा एक्लोपनको महसुस हुने छ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला, पेट सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ । भौतिक साधन तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा विचार पुयाउनुहोला अ’प्रिय घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न ।
कुम्भ राशि : बिहानको समय राम्रो रहेकाले पराक्रम बढेर जाने हुनाले साहसिलो काम गर्ने आँट आउने छ । माया प्रे’ममा नजिक हुने समय रहेको छ भने दा’म्पत्य जीवन सुखी रहने छ । मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकाले खानपान तथा मौसमको ख्याल गर्नुहोला, छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सम’स्या आउन सक्छ । अरूकै लहैलहैमा लागेर आफ्नो संस्कार भुल्दा पछि गएर पछुतो हुने ग्रहयोग रहेको छ ।
मीन राशि : बिहानको समय मध्ययम रहेकाले आफन्त, साथीभाइ तथा कुटुम्बसँग मन मु’टाव बढ्नेछ। माया प्रे’ममा सानो कुराले मन मु’टाव सिर्जना हुनसक्छ, ध्यान दिनुहोला । खानपानमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी स’मस्या आउनेछ । मध्यान्हबाट समय राम्रो रहेकाले लेखन कलाको माध्ययमले आफ्ना भनाइ जनमानसमा लैैजान सकिनेछ । पढ्न लेख्न मन लाग्नेछ भने नतिजा तपाईंकै पक्षमा पार्न सकिनेछ । पराक्रम बढेर जाने हुनाले साहसिलो काम गर्न जाँगर आउनेछ ।तपाईंको दिन शुभ रहोस् । युवा ज्योतिषी डीपी भण्डारी ज्योतिष परामर्श सेवा केन्द्र ।